Gbasara anyị
Lekwasị anya na inye okwute eke na arụrụ arụ
Ogo dị oke mma, ọnụ ahịa asọmpi, ọrụ a pụrụ ịdabere na ya
Otu esi agbapụtabụ dị ka onye na-emepụta kpọmkwem na onye na-ebubata mabụ eke, granite, onyx, agate, quartzite, travertine, slate, nkume artificial, na ihe ndị ọzọ sitere n'okike.Quarry, Factory, Sales, Design and Installation bụ akụkụ nke otu.E hiwere otu a na 2002 ma nwee ụlọ ọrụ ise na China ugbu a.Ụlọ ọrụ anyị nwere ngwá ọrụ akpaaka dị iche iche, dị ka ịkpụ blọk, slabs, tile, waterjet, steepụ, counter n'elu, tebụl n'elu, ogidi, sket, isi iyi, akpụrụ akpụ, mosaic tile, na ihe ndị ọzọ, na ọ na-ewe ihe karịrị 200 ndị ọrụ nwere nkà. nwere ike na-emepụta opekata mpe 1.5 nde square mita nke tile kwa afọ.
Otu esi agbapụta nwere ọtụtụ nhọrọ ihe nkume na ngwọta otu nkwụsị & ọrụ maka ọrụ marble na nkume.Ruo taa, na nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe, igwe ndị dị elu, ụdị njikwa dị mma, na ndị ọrụ mmepụta ihe, nhazi na nrụnye ọkachamara.Anyị arụchaala ọtụtụ nnukwu ọrụ gburugburu ụwa, gụnyere ụlọ gọọmentị, ụlọ oriri na ọ hotelụ ,ụ ,ụ, ebe a na-ere ahịa, Villas, ụlọ, KTV na klọb, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ọgwụ na ụlọ akwụkwọ, na ndị ọzọ, ma wulitekwa aha ọma.Anyị na-eme mgbalị ọ bụla iji zute ihe siri ike maka nhọrọ nke ihe, nhazi, mbukota na mbupu iji hụ na ihe ndị dị elu rutere n'enweghị nchebe na ọnọdụ gị.Anyị ga na-agba mbọ mgbe niile maka afọ ojuju gị.
GỊNỊ mere isi iyi na-ebili?
Kacha ọhụrụ na wewest ngwaahịa maka ma nkume eke na wuru nkume.
Magburu onwe CAD otu nwere ike na-enye ma 2D na 3D maka gị eke nkume oru ngo.
Njikwa ịdị mma siri ike
Ogo dị elu maka ngwaahịa niile, lelee nkọwa niile siri ike.
Ihe dị iche iche dị
Weta mabul, granite, marble onyx, marble agate, slab quartzite, marble wuru, wdg.
ONYE KWESỊRỊ ỌZỌ ỌZỌ
Ọpụrụiche na mbadamba nkume, tile, countertop, mosaic, waterjet marble, nkume akpụrụ akpụ, mgbochi na paver, wdg.
Akụkọ Nnwale Ngwaahịa Nkume sitere na SGS
Ọtụtụ n'ime ngwaahịa nkume anyị anwalela ma kwado ya site na SGS iji mesie ngwaahịa dị mma na ọrụ kacha mma.
Banyere Asambodo SGS
SGS bụ ụlọ ọrụ nyocha, nyocha, nyocha na asambodo nke ụwa.A ghọtara anyị dị ka akara nrịbama zuru ụwa ọnụ maka ịdị mma na iguzosi ike n'ezi ihe.
Nnwale: SGS na-edobe netwọkụ zuru ụwa ọnụ nke ụlọ ọrụ nyocha, nke ndị ọrụ maara ihe na ndị nwere ahụmahụ na-arụ ọrụ, na-enye gị ohere ibelata ihe ize ndụ, belata oge ịzụ ahịa ma nwalee àgwà, nchekwa na arụmọrụ nke ngwaahịa gị megide ahụike, nchekwa na ụkpụrụ nhazi.
2016 Nkume ngosi XIAMEN
2017 Nkume ngosi XIAMEN
2018 Nkume ngosi XIAMEN
2018 na-ekpuchi USA
2019 Nkume ngosi XIAMEN
Kedu ihe ndị ahịa na-ekwu?
Akwa!Anyị nwetara taịlị ndị a na-acha ọcha mabụl nke ọma, nke mara mma nke ukwuu, dị oke mma, na-abata na nkwakọ ngwaahịa dị ukwuu, ma anyị dị njikere ugbu a ịmalite ọrụ anyị.Daalụ nke ukwuu maka ọmarịcha ọrụ otu gị.
Ee, Mary, daalụ maka nlebara anya gị nke ọma.Ha dị oke mma ma na-abịa na ngwugwu echekwara.Enwere m ekele maka ọrụ ngwa ngwa na nnyefe gị.Tks.
Ndo maka izipu foto ndị a mara mma nke countertop kichin m ngwa ngwa, mana ọ bịara mara mma.
Enwere m obi ụtọ na marble ọcha calacatta.The slabs bụ n'ezie elu-edu.
Nnọọ na-akpọtụrụ anyị!
Black Granite, Granite odo odo, Gray Granite, Ihe mgbakwasị ụkwụ Blue Granite, Gray Gray dị ọkụ, Taịlị mgbidi Marble ọcha,